ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအပါအဝင် မြို့အချို့မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အခမဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ အဖွဲ့တွေ ပေါ်ပေါက်လာ
ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအပါအဝင် မြို့အချို့မှာ ကိုဗစ်-၁၉ က...
25 มี.ค. 2563 - 14:25 น.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် -၁၉ ဂယက်ကြောင့် မြို့ကြီးတွေမှာ အလုအယက်ဈေးဝယ်ယူတာတွေ ရှိလာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ကလေးနဲ့ မုံရွာစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာ နေအိမ်အပြင်မထွက်လိုသူတွေ အတွက် ဝယ်ယူလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကို လိုက်လံဝယ်ယူ ပေးပြီး ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့နဲ့ အိမ်အရောက်ပို့ပေးတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
ဒီလိုဝယ်ယူပေးတဲ့အဖွဲ့တွေဟာ နေအိမ်ပြင်ပထွက်ဖို့ အခက်အခဲရှိသူတွေအတွက် မီးဖိုချောင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေ၊ အစားအသောက်တွေ ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါး စတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တွေကို ကနဦးမှာ ငွေကြေးစိုက်ထားပြီး သွားရောက်ဝယ်ယူ ပေးကာ အိမ်ရောက်မှ ဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းဖိုးသာ ရှင်းပေးမှာဖြစ်ပြီး ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့နဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
' ' ဒီနေ့မနက်ကစပြီး ဖုန်းဆက်တာ အကူညီတောင်းတာတွေ တော်တော်လည်းရှိလာပြီ။ အများစုကတော့ ဆန်တို့ mask တို့ ဆေးဝါးတွေဝယ်ပေးဖို့ ဖုန်းဆက်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ ဒီရောဂါ အခြေအနေအရ ဘယ်လိုလူကိုမဆို ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေကိုတော့ ကူညီပေးသွားမယ်။ အကန့်အသတ်မရှိဘူး''လို့ ရန်ကုန်မြို့ မှာအခမဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတာကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ လူရွှင်တော်ပရဟိတအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုမျိုးထိုက်က ဘီဘီစီကို မတ် ၂၅ ရက်မနက်ပိုင်းကပြောပါတယ်။
လူရွှင်တော်ပရဟိတများအဖွဲ့က လတ်တလောမှာ ရန်ကုန်မြို့က စမ်းချောင်း၊ ၊ကြည့်မြင်တိုင်၊ လှိုင်၊ ကမာရွတ်၊ အင်းစိန် ၊မြောက်ဥက္ကလာ၊တောင်ဒဂုံ ၊မြောက်ဒဂုံ၊ တောင်ဥက္ကလာ စတဲ့မြို့နယ် ၉ခုမှာ မတ် ၂၅ ရက်နေ့ကစတင်ကူညီပေးနေပြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်းမှာလည်း ထပ်မံကူညီပေးသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့နည်းတူ စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ကလေးမြို့မှာလည်း အခုလို အခမဲ့ကူညီပို့ဆောင်ပေးတဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ အချို့ရှိလာပါတယ်။
ကလေးမြို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးပိုးတွေ့လူနာအဖြစ် ကြေညာခဲ့သူ ၂ဦးထဲက အမေရိကန်နိုင်ငံက လာသူ အမျိုးသားဟာ ကလေးမြို့ကို ၂ရက်ခန့်လာရောက်လည်ပတ်သွားလာတာလည်းရှိခဲ့တာကြောင့် မြို့ခံတွေကြား စိုးရွံ့ ထိတ်လန့်မှု တွေရှိနေတယ်လို့ ကလေးမြို့ခံ အချို့ကပြောပါတယ်။
'' တီးတိန်က ပိုးတွေ့လူနာက ရွှေဆိုင်ကိုသွားကြည့်တာလည်းရှိတယ်။ ပရီဝယ်ဒင်အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်တာ တို့ သွားတာတွေလည်းရှိတော့ မြို့ခံတွေက တော်တော်လေး စိတ်ပူကြတယ်။ မနေ့ကတော့ မြို့ပေါ်မှာ အလုအယက် ဈေးတိုးဝယ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီလို panic buying တွေမဖြစ်အောင် ရောဂါကူးစက် မှုကို ကာကွယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အခုလို ကူညီပေးဖြစ်တာပါ''လို့ ကလေးမြို့ခံလူငယ်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုစိုးထိုက်သူကဘီဘီစီကိုပြောပြပါတယ်။
မြို့ပေါ်က ဈေးဆိုင်အချို့လည်းပိတ်ထားတာကြောင့် စတင်ကူညီပေးတဲ့ ဒီကနေ့ မတ် ၂၅ ရက်မနက်ပိုင်း မှာတော့ ဝယ်မရတဲ့ဆေးဝါးအချို့ ဝယ်ပေးဖို့ အကူညီတောင်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ လည်း ကိုစိုးထိုက်သူကပြောပြပါတယ်။
ဒီလိုအိမ်အရောက် အခမဲ့ ကူညီဝယ်ယူပေးတဲ့နေရာမှာလည်း
'' အလွန်အကျွံဝယ်တာမျိုးလည်းမဖြစ်အောင် ဆန်ဆိုလည်း တစ်အိတ်လုံးကြီးဝယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်သလောက်ပဲ။ အိတ်လိုက်ထက် လိုအပ်သလောက်ပဲ ဝယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။''လို့ ကိုစိုးထိုက်သူက ပြောပြပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတ် ၂၅ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ တရားဝင်ထုတ် ပြန်ကြေညာချက်တွေအရ ကိုဗစ် -၁၉ ပိုးတွေ့လူနာ ၃ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပြီး ၃ဦးစလုံးဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေက ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအပါအဝင် မြို့အချို့မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အခမဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ အဖွဲ့တွေ ပေါ်ပေါက်လာ